Iingingqi ze-6.6 - ii-Geofumadas
Kukho olunye uhlobo lwezinto ezidibeneyo esingayenza nge-Autocad. Ku malunga nemimandla. Iingingqi ziindawo ezivaliweyo apho, ngenxa yobume bawo, izixhobo zomzimba zibalwe, njengeziko lokudakalisa, ngoko kwezinye iimeko kuya kuba lula ukusebenzisa olu hlobo lwezinto kunokuba iipollines okanye ezinye izinto.
Singenza into yommandla ukusuka, umzekelo, ipolline eqhotyoshelwe. Nangona kunjalo, zinokudalwa ukusuka kwintlangano ye-polylines, imigca, iipolgoni kunye ne-splines, nje kuphela ukuba zifake indawo ezivaliweyo ngendlela efanayo. Le nkqubela ibuye isenze ukuba senze izinto zommandla usebenzisa imisebenzi ye-Boolean, oko kukuthi, ukongezelela okanye ukukhupha indawo, okanye ukususela kwiintlanganiso. Kodwa masibone le nkqubo kwiindawo.
Ummandla uhlala udalwe ukusuka kwizinto ezivelelwe ngaphambili ezenza iindawo ezivaliweyo. Makhe sibone imizekelo emibini, enye ye-polyline kunye neminye yezinto ezilula ezichazela ngokucacileyo indawo.
Siza kufunda iipropati zommandla wesahluko se-26, ngelixa singathetha ukuba sinokudala imimandla esuka kwimimandla evuliwe isebenzisa umyalelo othi "CONTOUR", nangona lo myalelo unokudala iipollines. Masibone umehluko omnye okanye omnye.
Singafaka kwakhona imimandla emibini kwindawo entsha kunye nomyalelo we "UNION". Kwakhona, imimandla inokuqala ngokuqala ngeipollines okanye ezinye iifom ezivaliweyo.
Ukusebenza kwe-Boolean okuphambene nayo kusemthethweni, oko kukuthi, kummandla omnye uthabatha omnye kwaye ufumane ummandla omtsha ngenxa yoko. Oku kuphunyezwe ngo-"DIFFERENCE" umyalelo.
Umsebenzi wesithathu weBoolean ukudibanisa izifunda ukufumana indawo entsha. Umyalelo "INTERSEC".
Post edlulileyo«Edlulileyo 6.5 Propellers
Post Next 6.7 Nemiyalelo yesiNgesi kuphi na?Okulandelayo "